တရုတ်ဈေးကွက်ဆီသို့ RCEP လှိုင်းစီးသွားသော အရှေ့တောင်အာရှ သီးနှံများ - Xinhua News Agency
ထိုင်းနိုင်ငံ ချန်သာဘူရီပြည်နယ်တွင် အသစ်ခူးဆွတ်ထားသော ဒူးရင်းသီးများအား ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် မေ ၂၀ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
နန်နင်း၊ မေ ၁၂ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ဒူးရင်းသီးက အကောင်းဆုံးရာသီသို့ ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီး အဆိုပါ “အနံ့ပြင်းလှသော” သီးနှံမှာယူမှုများမှာ တရုတ်နိုင်ငံတွင် ဧပြီလကုန်ပိုင်း၌ စတင်မြင့်တက်လာကာ အဓိကထုတ်လုပ်ရာဖြစ်သော အရှေ့တောင်အာရှမှ သွင်းကုန်များ၏ မောင်းနှင်အားလည်း ဖြစ်သည်။
၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်တွင် စတင်အသက်ဝင်ခဲ့သော ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး လွတ်လပ်သောကုန်သွယ်ရေး သဘောတူညီချက်ဖြစ်သည့် ဒေသတွင်း ဘက်စုံစီးပွားရေးမိတ်ဖက်ဆက်ဆံမှု (RCEP) သဘောတူညီချက်သည် ယခုနှစ်ရောင်းအားကို ထပ်မံမြှင့်တင်ပေးလျက်ရှိသည်။
RCEP အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများသည် ကမ္ဘာ့ကြီး၏ ပြည်တွင်းအသားတင်ထုတ်ကုန်တန်ဖိုးနှင့် လူဦးရေ၏ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ရှိသည်။ အတည်ပြုထားသော အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအကြား ကုန်စည်ကုန်သွယ်မှု၏ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်မှာလည်း တဖြေးဖြေးချင်း စည်းကြပ်ခွန်ကင်းလွတ်သွားမည်ဖြစ်သည်။
“ကျွန်တော်တို့ ဒူးရင်း သေတ္တာ ၁၀၀ လက်ခံရရှိထားပါတယ်။ အဲဒါတွေရောက်လာပြီးတဲ့အခါ မကြာခင် ဖြန့်ချိသွားမှာပါ။ ဒါ့အပြင် ရပ်ကွက်ကုန်စုံဆိုင်တွေမှာလည်း တစ်ဦးချင်းဝယ်ယူသူတွေအများကြီးရှိတယ်” ဟု တရုတ်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်း ကွမ်ရှီးကျွမ့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသရှိ Charoen Pokphand Group ၏ လုပ်ငန်းခွဲ လုပ်ကိုင်နေသော Huang Meixia က ပြောကြားခဲ့သည်။ Charoen Pokphand သည် ထိုင်းနိုင်ငံရှိ ဦးဆောင် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုဖြစ်သည်။
ယမန်နှစ် အလားတူကာလနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ဒူးရင်းသီးများသည် ယခုနှစ် ဈေးနှုန်းမြင့်တက်နေသော်ငြားလည်း ရောင်းအားကောင်းနေကြောင်း Huang က မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။
ဒူးရင်းသီးများသည် တရုတ်နိုင်ငံတစ်ဝန်း အစားအသောက်ချစ်သူများ၏ အရသာတွေ့မှုကို သိမ်းပိုက်ထားသည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် လတ်ဆတ်သော ဒူးရင်းသီးများ တင်သွင်းမှုပမာဏမှာ ၂၀၁၇ ခုနှစ်ကထက် ၄ ဆရှိခဲ့သည်။
ကွမ်ရှီးကျွမ့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ မြို့တော် နန်နင်းရှိ ထိုင်းနိုင်ငံသားတစ်ဦးဖြစ်သော Nisachol Thaithong သည် ထိုင်းနိုင်ငံရှိ ၎င်း၏မိသားစုပိုင် သစ်သီးခြံမှ ဒူးရင်းသီးများကို တရုတ်နိုင်ငံသို့ တင်သွင်းသည့် စီးပွားရေးကို လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပြီး လွန်ခဲ့သောနှစ်များအတွင်း တည်ငြိမ်သော ဖောက်သည်အရင်းအမြစ် ရရှိခဲ့သည်။
“အရင်တုန်းက ဝယ်သူအတော်များများက ဒူးရင်းသီးဆိုရင် ရွှေခေါင်းအုံးဒူးရင်းသီးပဲ သိကြတာလေ။ အခုတော့ ဒူးရင်းသီး အမျိုးကွဲတွေအများကြီးဆိုတာ သူတို့အသိအမှတ်ပြုလာကြပြီ” ဟု Nisachol Thaithong က ပြောခဲ့သည်။
ကွမ်ရှီးတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ပိုမိုဝင်ရောက်လာခြင်းက နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်သစ်သီးကုန်သွယ်ရေး အဆင်ပြေချောမွေ့စေရန် အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် အအေးခန်း ထောက်ပံ့သယ်ပို့မှုသို့ အားဖြည့်ပေးလျက်ရှိသည်။
ကွမ်ရှီးရှိ ဆိုရှယ်မီဒီယာ နာမည်ကျော်ကြားသူ Wei Pan သည် ထိုင်းနိုင်ငံမှ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ခူးဆွတ်ထားသော ဒူးရင်းသီးများကို ကွမ်ကျိုးနှင့် ကူမင်း စသည့် တရုတ်နိုင်ငံရှိ မြို့များထံသို့ လေယာဉ်ဖြင့်တင်ပို့ရန် Nisachol Thaithong နှင့် မိတ်ဖက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။
“ထိုင်းကနေ တရုတ်အထိ ဒူးရင်းသီးတွေ လေယာဉ်နဲ့သယ်ဆောင်ဖို့ အချိန် ၂ နာရီနဲ့ ၃ နာရီသာလိုပါတယ်။ တရုတ်ဈေးကွက်ကို ရောက်တဲ့အခါ ဒူးရင်းသီးတွေရဲ့ အခွံကစိမ်းပြာရောင်လေးတွေရှိနေဆဲဆိုတော့ အသီးရဲ့ လတ်ဆတ်မှုကို ဖော်ပြနေတယ်လေ” ဟု Wei က ဆိုသည်။
ကွမ်ရှီးရှိ ချင်ကျိုးဆိပ်ကမ်းသည် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ကွန်တိန်နာတိုက်ရိုက်လမ်းကြောင်းများစွာ ဖွင့်လှစ်ထားလျက်ရှိသည်။ Laem Chabang မှ ချင်ကျိုးသို့ သစ်သီးတင် အဝေးပြေးလိုင်းများမှာလည်း တစ်ပတ်လျှင် လေးကြိမ်ပြေးဆွဲလျက်ရှိပြီး သီးနှံများမှာ အချိန် သုံးရက်မှ လေးရက်ခန့်အတွင်း တရုတ်နိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည်။
တရုတ်နိုင်ငံမှ စားသုံးသူများက ဝယ်ယူမှု အားကောင်းပြီး အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များအတွက် ဝယ်လိုအားများပြားကြောင်း နန်နင်းမြို့ရှိ ထိုင်းနိုင်ငံ ကောင်စစ်ဝန် Benjamas Tanvetyanont က မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။
ထိုင်းနိုင်ငံမှ ဒူးရင်းသီးများအပြင် မလေးရှားနိုင်ငံမှ ဒူးရင်းသီးများမှာလည်း တရုတ်နိုင်ငံတွင် လူကြိုက်များလျက်ရှိသည်။
တရုတ်နိုင်ငံနှင့် မလေးရှားနိုင်ငံမှ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည် ဒူးရင်းသီးကုန်သွယ်ရေးတွင် အာရုံစူးစိုက်မှု ရရှိလာသည့်အနက် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ကုန်သွယ်ရေး၌ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု နှင့် မဟာဗျူဟာမြောက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မြှင့်တင်ရန် သဘောတူစာချုပ် ၁၁ ခုကို လတ်တလောလက်မှတ်ရေးထိုးထားကြောင်း သိရသည်။
RCEP သည် ကွမ်ရှီးနှင့် မလေးရှားနိုင်ငံ နှစ်ဖက်လုံးမှ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အခွင့်အလမ်းများစွာ ဆောင်ကြဉ်းပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် RCEP အောက်တွင် တရုတ်နိုင်ငံနှင့် မလေးရှားနိုင်ငံတို့သည် စီးပွားရေးနီးကပ်မှုနှင့် ကုန်သွယ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ထူထောင်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း မလေးရှား နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ရေးနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး Lim Ban Hong က ပြောကြားခဲ့သည်။ (Xinhua)
NANNING, May 10 (Xinhua) — Durians have entered their best season, and orders for the “stinky” fruit in China began to soar in late April, driving its imports from Southeast Asia, its main producing area.
The Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) agreement, the world’s largest free trade deal to date that took effect on Jan. 1, 2022, has further boosted its sales this year.
The RCEP countries account for roughly 30 percent of the world’s gross domestic product and population. Over 90 percent of trade in goods among approved member states will gradually be tariff-free.
“We received 100 boxes of durians, which were distributed soon after arrival. Besides community convenience stores, there are also many individual customers,” said Huang Meixia withasubsidiary of Charoen Pokphand Group in south China’s Guangxi Zhuang Autonomous Region. Charoen Pokphand Group isaleading agribusiness conglomerate in Thailand.
Nisachol Thaithong,aThai national in Nanning, Guangxi’s capital city, runsabusiness importing durians from her family’s orchard in Thailand to China and has accumulatedastable customer source over the past years.
“When it came to durians in the past, many consumers only knew Golden Pillow. Now they can recognize many more durian varieties,” said Nisachol Thaithong.
“It takes only two to three hours for the durians to fly from Thailand to China. Their shells are still turquoise when they appear on the Chinese market, indicating their freshness,” Wei said.
Guangxi’s Qinzhou Port has opened several direct container routes to Thailand. The fruit express line from Laem Chabang to Qinzhou runs four timesaweek, and the fruits can reach China in about three to four days.
Photo : Photo taken on May 20, 2020 shows newly-picked durians in Chanthaburi Province, Thailand. (Xinhua/Rachen Sageamsak)